S: Halkee ku taal oo baabuur dhigasho ayaad leedahay?
J: Cinwaankeennu waa 200 Church Street, oo ku yaal geeska Kaniisadaha iyo King Streets ee ku yaal bartamaha magaalada Burlington (dhismaha hadda ee Burlington Telecom). Nasiib darrose, ma lihin meel gawaarida la dhigto oo noo gaar ah, laakiin waxaa jira baarkin dhigis mitir iyo mitir la'aan ah oo ku dhex jira laba lugood.
S: Waa maxay caddaaladda soo celinta?
J: Waan ku faraxsanahay inaad na weydiisay. Fiiri boggan.
S: Waa maxay farqiga u dhexeeya Xarumaha Caddaaladda Bulshada iyo Weecinta Maxkamadda?
J: Weecinta Maxkamaddu waa barnaamij, lagu muujiyey sharciga Vermont, kaas oo dadku ku qaadaan mas'uuliyadda ficilladooda sharci darrada ah ee lagu beddelayo nidaamka maxkamadda caadiga ah. Xarumaha Cadaalada Bulshada (CJC's) waa dhismayaasha dallad balaaran oo hoostaga adeegyo kaladuwan oo gudaha laga bixiyo. Toddoba degmo, oo uu ku jiro Chittenden, Diidmada Maxkamadda waxaa bixiya CJC. Vermont's 20 CJC's waxay bixisaa adeegyo fara badan, oo ku kala duwan xarunta, oo ay maalgeliso Waaxda Asluubtu. Kuwaas waxaa ka mid ah golayaasha dib-u-soo-celinta xukunka ka hor iyo ka dib iyo sidoo kale adeegyada loogu talagalay dadka ku soo noqonaya beeshooda maxaabiista ka dib. Qaar ka mid ah CJC waxay ku bixiyaan adeegyo dheeri ah ilaha kale ee maalgelinta. Wareejinta Maxkamadda waxaa laga bixiyaa dhammaan gobollada waxaana maalgeliya Xafiiska Xeer Ilaaliyaha Guud; maaliyaddani waxay kaloo taageertaa barnaamijka DLS ee madaniga ah, Barnaamijka Badbaadinta Ku Xadgudubka Maandooriyaha Maandooriyaha, Tamarack, iyo Adeegyada Pretrial. Weecinta Maxkamada iyo adeegyo badan oo ay bixiso CJC waxay ku tiirsan yihiin mutadawiciinta bulshada waxayna isticmaalaan mabaadi'da cadaalada dib u soo celinta.
S: Caawinaad! Tikidka cabitaanka ee aan qaan gaarin ee aan helay wuxuu ii sheegay inaan u baahanahay inaan kula soo xiriiro 15 maalmood. Waxaan wacay oo aan ka tagay fariin laakiin dib ugama maqal adiga saacaduna waa hagaageysaa!
J: Ha welwelin! Markaad na soo wacdo oo aad ka tagto magacaaga, taariikhda dhalashadaada, lambarka taleefankaaga iyo magaalada aad ku xadgudubtay aalkolada ama marijuana, waxaad samaysay wixii aad u baahan tahay inaad sameyso si aad u joojiso "saacadda oo xannibaysa." Waxaa laga yaabaa inaan wali sugeyno inaan ka helno tigidhka dhabta ah iyo waraaqaha ka imanaya Qeybta Booliiska ee soosaaraysa sidaas darteed waxaad sugi kartaa inta usbuucyo ah inaad naga maqasho. Mid ka mid ah shaqaalahayaga ayaa nala soo xiriiri doona.
S: Waxaan la doodayaa deriskayga. Ma caawin kartaa?
J: Suurtagal! Waxaan haynaa dhexdhexaadiye tababaran oo ku saabsan shaqaalaha, Barbara Shaw-Dorso, oo aad kala xiriiri karto bshawdorso@burlingtonvt.gov . In kasta oo aanaan awood u leenahay in aan kiisaska oo dhan qaadno, haddana waannu kaala hadli karnaa waxyaabaha gaarka ah, tixraaci karnaa markii ay habboon tahay, iyo mararka qaarkood, oo suurtogal ah in aan kiiska dhex dhexaadinno halkan.
S: Waxaan si guul ah u soo maray Weecinta Maxkamadeed oo hadda waxaan qorayaa / codsanayaa shaqada / dugsiga. Miyay tahay inaan shaaca ka qaado diiwaankeyga?
J: Haddii aad si guul leh u dhammaystirtay hawsha wareejinta Maxkamadda, diiwaankaaga ayaa la xidhay ama la tirtiray umana baahnid inaad shaaca ka qaaddo inta badan kiisaska sida kirada guryaha iyo inta badan codsiyada shaqada. Si kastaba ha noqotee, waxaa jira waxyaabo ka reeban oo ku kala duwanaan kara gobolka. Markii aad codsaneysid ruqsadaha xirfadeed ee dowlad-goboleed soo saartay (sida dalbashada ku dhaqanka sharciga), markaad codsaneysid federaalka iyo qaar ka mid ah jagooyinka fulinta sharciga), markaad codsaneysid xafiis dowladeed, markaad iibsaneyso qori ama aad codsaneyso ruqsad qaadis qarsoon, ama markaad codsaneyso shaqo la xiriirta dugsiga, waxaad u baahan kartaa inaad shaaciso. Si aad wax badan uga ogaato, waxaad la tashan kartaa qareen ama waxaad booqan kartaa bogga internetka ee Caawinta Sharciga ee VT .
S: Ma iga caawin kartaa guryeynta?
J: In kasta oo aanaan bixin adeegyada guryaha, waxaan kuu tilmaami karnaa hay'adaha sameeya. Haddii dhowaan lagaa sii daayo xabsiga, waxaan ku bixin karnaa xoogaa caawimaad ah Adeegyada Dib-u-soo-celinta Bulshada .
S: Waxaan rabaa inaan iska qoro fasalka wadista Safe. Ma iga caawin kartaa taas?
J: Burlington CJC ma bixiso fasalka Wadista Nabadgelyada, si kastaba ha noqotee waad booqan kartaa boggayaga Dhacdooyinka si aad u hesho fasalo Degmada Chittenden. La xiriir qofka kuu gudbinaya (annaga, qareenkaaga, sarkaalka asluubta, iwm.) Si aad isuqorto.
S: Guddi baa la ii diray. Muddo intee le'eg ayay qaadashadu qaadanaysaa? Mudo intee le'eg ayey qaadan kartaa hawsha oo dhan?
J: Qaadashada waxay guud ahaan socotaa saacad. Hawsha oo dhan guud ahaan waxay socotaa inta u dhexeysa 3-4 bilood, laakiin way kala duwanaan kartaa xoogaa iyadoo ku xiran awoodda aad u leedahay inaad ku dhammaystirto shuruudahaaga qandaraaska iyo helitaanka jadwalkaaga.
S: Boolis ayaa i siiyay waraaqo fara badan markii la igu qabtay anigoo qaan-yar oo cabbaya. Maxaa la gudboon inaan sameeyo hadda?
J: Waxay u badan tahay in laguu gudbin doono Barnaamijkeena Badbaadinta Ku Xadgudubka Maandooriyaha Maandooriyaha laakiin sidoo kale waxaa laga yaabaa inaad haysato tigidh ku saabsan been ka sheegida da'daada / adeegsiga aqoonsi been abuur ah. Waxaan inbadan kalahadli doonaa talaabooyinka xiga ee midkasta. Nala soo hadal! Kala xiriir Balla lambarka 802-735-8275 ama emayl u dir bsankareh@burlingtonvt.gov
S: Anigu waxaan ahay dhibane dambi laakiin ma ogi waxa dacwadayda laga qabanayo.
J: Aad ayaan uga xunnahay inaad tan la kulantay. Haddii aad ahayd dhibbane dambi iyo / ama waxyeello ka dhacday Burlington oo lagu soo wargeliyay booliiska, shaqaalaheenna barnaamijka Barbaarta Caddaaladda waa inay kula soo xiriiraan toddobaad gudihiis markii shilku dhacay. Haddii aadan ku soo wargalin booliska, ama aadan wali ka maqal Parallel Justice, waxay diyaar u yihiin inay kaa caawiyaan ilaha, taageerada, iyo macluumaadka ku saabsan dacwadaada iyo fal dambiyeedka ka dib. Kim Jordan oo ah (802) 264-0764 ama kjordan@burlingtonvt.gov iyo Anthony Jackson-Miller oo ah (802) 540-2394 ama ajacksonmiller@bpdvt.org Haddii aad ahayd dhibbane dambi ka baxsan Burlington, shaqaalaheena Parallel Justice way kaa caawin doona inaad ka hesho ilo deegaankaaga ah.
S: Waxaan ahay dhibane danbi oo loo gudbiyay hawsha guddigaaga. Waxaan rabaa inaan kaqaybqaato laakiin ma hubo inaan qol la wadaagi karo qofka masuulka ka ah. Weli ma ka qayb geli karaa?
J: Kaqaybqaadashada dhibbanayaashu gabi ahaanba waa ikhtiyaari waxaadna yeelan doontaa xiriiriyaha dhibanaha si uu kaaga taageero inta hawsha socoto. Waxaad ka baran kartaa wax badan oo ku saabsan caddaaladda soo celinta halkan iyo isbarbar dhigga caddaaladda halkan . Caddaaladda dib-u-soo-celinta waxay ku saabsan tahay kor u qaadida fahamka iyo xiriirka u dhexeeya qofka mas'uulka ka ah fal-dambiyeedka, qofka (dadka) ay waxyeellada ka soo gaadhay dembiga (haddii ay doortaan), iyo bulshada wada-hadalka ah. Faa'iidooyin dhowr ah ayaa ka imaan kara ka qaybqaadashada dhibbanaha. Waxay kuu oggolaaneysaa inaad maqasho waxa ku dhacayay maskaxda dembiilaha xilligii falku dhacay iyo waxa / iyadu / iyadu / ay ka fikirayeen ilaa iyo; waxaad fursad u heli kartaa inaad la wadaagto sida dhacdadu kuu saameysay; waxaadna weydiin kartaa su'aalaha dembiilaha si uu kaaga caawiyo inaad fahanto waxa dhacay iyo sababta. Haddii aadan rabin inaad si shaqsi ah ugaqaybqaadato, ikhtiyaarrada kale ayaa kuu furan oo ay kujiraan wadaagista sheekadaada qoraal iyo / ama qabashada xiriiriyaha dhibanahaaga oo aad aragtidaada la wadaagto guddiga. Dacwadaha dhalinyarada fadlan kala xiriir Kim Jordan (802) 264-0764 ama kjordan@burlingtonvt.gov. Wixii kiisaska qaangaarka ah fadlan kala xiriir Barbara Shaw-Dorso halkan
(802) 264-0765 ama bshawdorso@burlingtonvt.gov
Halkan ka eeg su'aalo badan oo ku saabsan Caddaaladda Restorative halkan iyo ku saabsan Weecinta Maxkamadda halkan .